दलहरूका दास बन्नु हुँदैन नयाँ पुस्ता !
सुरेश आचार्य सोमवार, कात्तिक २०, २०७४ 1467 पटक पढिएको
नेपालमा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्, तर ती परिणाममुखी भएनन् । पछिल्लो ६५ वर्षमा थरीथरीका संविधान प्रयोग गरिएको हो, तर कुनैले काम गरेनन् । पुराना दलका चुनावी घोषणापत्र, विधान वा ती दलका नेताहरूको हुँकार सुन्ने र पढ्ने हो भने लाग्छ नेपालको राष्ट्रिय एकीकरण गरेका र यो देशलाई अहिलेसम्म जीवित राख्ने पनि वामपन्थी-साम्यवादी वा लोकतान्त्रिक खेमाका हुन् । राष्ट्र निर्माणलाई अस्वीकार गरेर राजनीति गर्ने नैतिक आधार यिनीहरूमा नहुनुपर्ने हो । ‘देशै नरहे हामी कहाँ रहन्छौं ? ’ नयाँ पुस्ताका लागि पनि यो गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने कठिन प्रश्न हो ।
नेपाल र नेपाली जनताले इतिहासमा कहिल्यै पनि विदेशीको उपनिवेश हुनुपरेन । नेपालले सदैव आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वतन्त्रता कायम राख्दै आएको छ । विश्वकै सबैभन्दा विशाल आबादी र अर्थतन्त्र भएका चीन र भारतका बीचमा अवस्थित निर्धन राष्ट्रको राष्ट्रिय एकीकरणलाई आत्मसात गर्न नसक्नेहरूले कसरी आफूलाई देशभक्त प्रमाणित गर्न सक्छन् ? ६० वर्ष उमेर नाघेका समूहका अहिलेका नेताले नै नेपाली जनताको सदासयता र मतदाताको सोझोपनको निरन्तर फाइदा उठाइरहेका छन् । यिनले बुझ्नुपर्छ- आजको पुस्ता राजनीतिक वाद र रुमानी क्रान्तिकारितामा विश्वास गर्दैन, यो नवीन पुस्ता स्वतन्त्रता, सुशासन, न्याय, सुरक्षा, अवसर, आत्मोन्नति, विकास र समृद्धिमा विश्वास गर्दछ ।
विभिन्न कालखण्डमा भएका परिवर्तनको उपलब्धिस्वरूप जनताद्वारा निर्मित नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक संघीय राज्य प्रणालीको कार्यान्वयन हुन लागेको छ । यसकारण आसन्न मंसिर १० र २१ को आमनिर्वाचन हरेक दृष्टिले नयाँ पुस्ताका लागि महत्वपूर्ण र निर्णायक छ । यसैले राजनीतिमा युवाहरूको सशक्त हस्तक्षेप हुन जरुरी छ ।
विदेशी भूमिमा रगत-पसिना बगाउने झन्डै ५० लाख युवायुवती र तिनका परिवारजनले जनतालाई रोजगार, सेवा र सुरक्षासमेत दिन नसक्ने दल र तिनका उम्मेदवारलाई कुन आशा र अपेक्षाका साथ अब फेरि मतदान गर्ने ?
नेपालकै उदाहरण लिने हो भने पनि २००७ देखि २०४७ सम्म पहिलोपटक देशको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा अधिकांश व्यक्तिहरू ३३ देखि ३७ वर्षको उमेरका थिए । उनीहरूको कार्यक्षमता प्रशंसनीय नै थियो । जब ती मान्छे नै पटकपटक दोहोरिन थाले, त्यसपछि उनीहरूको प्रभावकारिता घट्दै गयो । २०४७ सालपश्चात् ४५ देखि ८७ वर्षको उमेरका प्रधानमन्त्री रहे । अहिले त २०१५ सालपछि जन्मेको पुस्ता राजनीतिको मुकाममा पुग्नै सक्तैनन् । यो पुस्तालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न नचाहने पुरानाहरूको प्रवृत्तिलाई नयाँ पुस्ताका मतदाताले स्वीकार गर्नु हुँदैन । नत्र, नयाँ पुस्ताले चाहेको प्रगति र आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण, अहिलेको र भावी पुस्ताको जीवनकालभर सम्भव देखिँदैन ।
आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछिका आगामी पाँच वर्ष नेपालका लागि अत्यधिक चुनौतीपूर्ण छन् । त्यसबेलाका चुनौतीहरूलाई सहजै अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्ने स्थिर र सशक्त युवा नेतृत्वको सरकार आवश्यक छ । अब राजनीतिक विवाद र कोरा नारामा समय खेर फाल्ने सुविधा नेपालीलाई छैन । यो त राष्ट्रिय समृद्धि र नवनिर्माणको स्पष्ट मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला हो । नवीन पुस्ताको चाहनाबमोजिम २५० वर्षदेखिको एकात्मक राज्य प्रणालीको विधिवत् अन्त्य भई नेपाल नयाँ चरणको रूपान्तरणमा प्रवेश गर्नेछ । जुनबेला तात्कालिक चुनौतीहरू ज्यू“का त्यूँ रहनेछन् भने नेपाललाई युगान्तकारी बाटो हिँडाउने जिम्मेवारी नेतृत्वकै हुनेछ ।
हिमाल, पहाड र तराईमधेसका नेपालीले आफ्नो जीविकोपार्जनका क्रममा देश विकासको लागि चुहाएको पसिनाको मूल्य अनमोल छ । खासगरी हाम्रा देशका किसानले बीउविजन, मलखाद र सिँचाइ अभावमा पनि दुःखकष्ट गरी खेतबारीमा उत्पादन गरेर, हाम्रा श्रमिक वर्गले पसिना चुहाएर न्यून पारि श्रमिकमा बनीबुतो गरी आफ्ना सन्ततिलाई भरणपोषण र शिक्षादीक्षा दिएकै छन् ।
हाम्रा सेना र प्रहरी जवानले विकट भूभागमा होस् या भूकम्पका बेला अदम्य साहसका साथ आफूलाई सुम्पेको काम गरेका छन् । तिनीहरूले देशको सिमानाको रक्षा, कठिनतम भूभागमा राजमार्ग र पूर्वाधारको निर्माण, विपद् व्यवस्थापन तथा जीउधनको रक्षा गर्दै आएका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र र विकासको गति कमजोर भए पनि हाम्रा उद्यमी, सिल्पी, यातायात, निर्माण व्यवसायीहरू र परदेशमा बसोवास गर्ने गैरआवासीय नेपालीका साथै वैदेशिक रोजगारमा जाने युवायुवतीले मातृभूमिको अर्थतन्त्र र विकास टिकाएर राख्न ठूलै गुण लगाएका छन् । हाम्रा प्राविधिकहरूका ज्ञान र सीपबाट देश विकासको आधारशिला पाएको छ । यिनीहरूको विवेक र मेहनत नेपाललाई प्रगतिपथमा अघि बढाउने टेको बनेको छ ।
भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेका, अख्तियारले डाम्न लागेका वा डाम्ने तयारी गरेका, जनताको करबाट उठेको राज्यकोषको करोडौं रुपैयाँबाट स्वास्थ्योपचार गर्ने बानी परेका, सुरक्षा ‘थ्रेट’ नभई वर्षौंदेखि सुरक्षाका नाममा व्यक्तिगत सुविधा लिन पल्केका र जानीजानी मुलुकको संक्रमणकाल लम्ब्याएर राजनीतिक अस्थिरता कायम राख्नेहरूबाट मुलुकमा सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । विदेशी भूमिमा रगत-पसिना बगाउने झन्डै ५० लाख युवायुवती र तिनका परिवारजनले जनतालाई रोजगार, सेवा र सुरक्षासमेत दिन नसक्ने दल र तिनका उम्मेदवारलाई कुन आशा र अपेक्षाका साथ अब फेरि मतदान गर्ने ?
आसन्न आमचुनावमा ६० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका ८० प्रतिशत जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ पुस्ताका उम्मेदवारलाई विजयी गराउनु आवश्यक छैन र ? देशभरिका मतदाताले आफू कुनै राजनीतिक पार्टीको ब“धुवा मजदुर वा दास होइन, एक स्वतन्त्र नागरिक र एक निर्बन्धन मतदाता हो भन्ने मनन गर्नु आवश्यक छ । जुनसुकै पार्टीका किन नहोऊन्, नया“ सोच, विचार, जोस भएका नया“ पुस्ताका उम्मेदवारलाई विजयी गराउनेतर्फ स्वतस्फूर्त अभियान घरघरबाट सुरु गर्नैपर्छ । होइन भने ‘घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार !’ मात्र हुन्छ ।
काठमाडौं- ५ मा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा 6589
भ्रष्टाचारका पाँच सय मुद्दा सर्वोच्चमा अड्किए 1217
प्रदेशमा तत्काल पाँच हजार कर्मचारी 13403
चीनसँगको एउटा मात्र नाका चार दिन बन्द 1227
गोरखामा एक बोरा सुतली बम भेटियो (अपडेट) 5418
निर्वाचन विरोधी एक शिक्षक पक्राउ 1049
निर्वाचन कार्यालयमै शक्तिशाली बम 2699